ရေဘဲ (တေဇာ – လရောင်လမ်း) | လမ်းအိုလေး
ရေဘဲ (တေဇာ – လရောင်လမ်း)
September 20, 2013 by lanolay	Leaveacomment
သူက ခေါင်းကို သားရေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ လက်တင်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ မှီဖျော့ထားလိုက်တယ်။ မျက်လုံးတွေကို မှိတ်လိုက်ပြီး သေခြင်းတရားအကြောင်း အတွေးဆန့်နေမိတယ်။ သေခြင်းတရားဆိုတာကတော့ သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်လိုပဲ ငြိမ်သက်လှပါတယ်။ မေလရဲ့နှင်းဆီတစ်ပွင့်လိုလည်း ချိုမွှေးတယ်။ ဒီနေ့တွေမှာ ရေဘဲကတော့ သေခြင်းတရားအကြောင်း အတော်လေး တွေးနေမိခဲ့တာပဲ။ သူ့စိတ်ထဲမှာ သူ့ရဲ့ ထာဝရမှေးစက်ရာကို ပျော်မွေ့နေတယ်လို့ ထင်နေရတယ်။
ဘာသာပြန် – တေဇာ | Mirrored from: လရောင်လမ်း
ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း ကွန်ကရစ်လှေကားရဲ့ အောက်ခြေအထိ ရောက်တော့ ဟိုးအရှေ့ဆီကို အဆုံးမရှိလို့ ထင်ရလောက်အောင် ဖြန့်ခင်းထားတဲ့ ကော်ရစ်ဒါတစ်ခုကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်။ မျက်နှာကြက်က အရမ်းမြင့်ပြီး ရှည်လျားလှတဲ့ ကော်ရစ်ဒါတစ်ခု။ ကော်ရစ်ဒါဆိုတာထက် လမ်းမြောင်က ခြောက်ကပ်နေတဲ့ မိလ္လာမြောင်းတစ်ခုနဲ့တောင် ပိုတူနေတယ်။ အဆင်တန်ဆာဆိုလို့ တစ်ခုမှမရှိတော့ ဒါမျိုးမှ တကယ့်ကော်ရစ်ဒါစစ်စစ်လို့တောင် ကြွေးကြော်ရလောက်တယ်။ မီးရောင်ကလည်း ခရမ်းချဉ်သီးလောက်ပဲလင်းတယ်။ ဒီကော်ရစ်ဒါထဲမှာ အလင်းရောင်ကိုယ်တိုင်တောင် လမ်းမှားတွေထဲ ခဏခဏ၀င်မိပြီး နောက်ဆုံးကျမှ လိုရာအရပ်ရောက်ခဲ့ရပုံပဲ။ ဖုန်မှုန့်မဲမဲထူထူတွေကို ဖြတ်ပြီး ကျွန်တော်လျှောက်လာလိုက်တယ်။ မျက်နှာကြက်တစ်လျှောက် အကွာအဝေး မညီမညာတပ်ထားတဲ့ မီးချောင်းတွေမှာ အဲဒီဖုန်မှုန့်တွေက ကပ်နေတယ်။ မီးချောင်းတွေကလည်း သုံးချောင်းမှာ တစ်ချောင်းလောက်က ကျွမ်းနေပြီ။ ကျွန်တော့်လက်ကိုတောင် ကျွန်တော်ပြန်မမြင်ရသလောက်ပဲ။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ နေရာပါ။ မှိန်ပြပြလမ်းမြောင်လေးတစ်လျှောက်မှာ ရှိနေတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အသံကတော့ ကျွန်တော့်တင်းနစ်ရှူးဖိနပ်က ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်နဲ့ထိလို့ ထွက်လာတဲ့ တဖျပ်ဖျပ်အသံပဲ။
ကျွန်တော် ဆက်လျှောက်လာလိုက်တယ်။ ကိုက်နှစ်ရာ၊ ကိုက်သုံးရာ၊ မိုင်ဝက်လောက်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော် ဘာကိုမှ မစဉ်းစားဘူး။ လမ်းလျှောက်နေရုံပဲ။ အချိန်မရှိဘူး။ အကွာအဝေးမရှိဘူး။ ကျွန်တော်ရှေ့ကို ရွေ့လျားနေတယ်ဆိုတဲ့ အသိတောင် မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ရွေ့လျားနေခဲ့မှာပါပဲလေ။ ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ `တီ´ ပုံသဏ္ဌာန် လမ်းဆုံတစ်ခုကို ရောက်လာတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
ဂျာကင်အင်္ကျီအိပ်ကပ်ထဲကနေ တွန့်ကြေနေတဲ့ ပို့စ်ကတ်တစ်ခုကို နှိုက်ယူလိုက်ပြီး အဲဒီအပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့စာသားပေါ်ကို ကျွန်တော် မျက်စိကစားလိုက်တယ်။ `ကော်ရစ်ဒါအတိုင်း တည့်တည့်ဆင်းပြီး လျှောက်လာပါ။ လမ်းဆုံရောက်တဲ့အခါ ညာဘက်ကိုချိုးသွားတဲ့ နောက်ကော်ရစ်ဒါတစ်ခုရှိမယ်။ အဲဒီမှာ သင်တံခါးကို ရှာတွေ့လိမ့်မယ်´ ကျွန်တော်ရှေ့က နံရံပေါ်မှာ ရှာလိုက်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တံခါးရဲ့ အရိပ်အယောင်ကို မတွေ့ပါဘူး။ တံခါးတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အရိပ်အယောင်လည်း မတွေ့ဘူး။ ဒီနံရံပေါ်မှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတုန်းက တံခါးတစ်ခုတပ်ဆင်ထားတယ်လို့ ရည်ညွှန်းတာ တစ်ခုမှ ရှိမနေဘူး။ ထူးခြားတဲ့အရိပ်အယောင် တစ်ခုမှမရှိတဲ့ ရိုးရိုး ကွန်ကရစ်နံရံတစ်ခုပါပဲ။ တက္ကဗေဒတံခါးလည်း မရှိ။ သင်္ကေတတံခါးလည်း မရှိ။ ဥပမေယျတံခါးလည်း မရှိ။ ဘာဆိုဘာမှ မရှိ။ ကျွန်တော်က နံရံကို လက်ဖ၀ါးနဲ့ ပွတ်ပြီး စမ်းကြည့်နေမိတယ်။ ချောမွေ့ပြောင်ရှင်းနေတဲ့ နံရံမှ နံရံအစစ်။
တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီဆိုတာ ကျွန်တော်သေချာသွားတယ်။
နံရံမှာ ကျောမှီရင်း စီးကရက်တစ်လိပ်ကို ကျွန်တော်သောက်လိုက်တယ်။ ကဲ အခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ရှေ့ဆက်တိုးမလား၊ နောက်လှည့်ပြန်မလား။
ဒါက မျက်မှောင်ကြီးကုပ်ပြီး အလေးအနက်အဖြေထုတ်ရမယ့်အရာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ ရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။ ရှေ့ဆက်တိုးရုံပဲ ရှိတယ်။ ဆင်းရဲဇာတာပါတာကို ကျွန်တော် စိတ်ပျက်လှပြီ။ လစဉ်ကြေးတွေ၊ မယားစားရိတ်တွေ၊ စုတ်ပြတ်နေတဲ့ တိုက်ခန်း၊ ရေဘုံဘိုင်က ပိုးဟပ်တွေ၊ ရုံးချိန်မှာ ကားလမ်းပိတ်နေတာတွေ၊ အကုန် အကုန် စိတ်ပျက်လှပြီ။ နောက်ဆုံးတော့ အမိုက်စား အလုပ်တစ်ခုကို အခု ကျွန်တော်ရှာတွေ့ပြီလေ။ လုပ်ရမယ့်အလုပ်က လွယ်တယ်၊ လစာက အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင် မြင့်တယ်။ တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ် ဘောနပ်စ် ရမယ်။ နွေရာသီ အားလပ်ရက်ရှည်ရှည် ရမယ်။ ဒီတော့ တံခါးတစ်ခုကို ရှာဖို့ခက်နေရုံလောက်နဲ့ ကျွန်တော်က ဘာလို့လက်လျှော့ရမှာလဲ။ ဒီနားမှာ တံခါးကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်အဖို့ကတော့ မတွေ့, တွေ့တဲ့အထိ ရှာရုံပဲ။
ကျွန်တော်က လစာငွေအကြောင်းကို တွေးလာလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဲကွန်းတပ်ထားတဲ့ အလုပ်ရုံးခန်းထဲက အေးမြလတ်ဆတ်တဲ့ လေအကြောင်း။ အလုပ်ရှိတာကလည်း မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေ ပိုသွက်လာတယ်၊
အိတ်ကပ်ထဲက တစ်ဆယ်တန်အကြွေစေ့တစ်ခုကို ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး လေထဲမြှောက်လိုက်တယ်။ ခေါင်းပဲ။ ကျွန်တော်က လက်ယာဘက်ကော်ရစ်ဒါကို ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ လမ်းက ညာဘက်ကို နှစ်ခါကွေ့တယ်၊ ဘယ်ဘက်ကို တစ်ခါကွေ့တယ်။ လှေကားဆယ်ထစ်ဆင်းလိုက်ရပြီးတော့ ညာဘက်ကိုပဲ ထပ်ကွေ့သွားပြန်တယ်။ ဒီထဲက လေထုက ကျွန်တော့်ကို ကော်ဖီခရင်မ်ကို သတိရစေတယ်။ အေးစိမ့်ပြီး ထူးထူးခြားခြား ထူထဲနေလို့ပဲ။ ကျွန်တော်က လစာငွေအကြောင်းကို တွေးလာလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဲကွန်းတပ်ထားတဲ့ အလုပ်ရုံးခန်းထဲက အေးမြလတ်ဆတ်တဲ့ လေအကြောင်း။ အလုပ်ရှိတာကလည်း မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေ ပိုသွက်လာတယ်၊ ကော်ရစ်ဒါအတိုင်း ရှေ့ဆက်လာလိုက်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ တံခါးတစ်ချပ် ရှေ့မှာတွေ့လိုက်ရတယ်။ အဝေးကကြည့်ရင်တော့ တံခါးက စုတ်ပြတ်ပြတ် စာတိုက်ပုံးတစ်ခုပုံ ပေါက်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ နီးလာလေလေ တံခါးတစ်ချပ်ပုံစံ ပိုပေါ်လာလေပဲ။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဒါ တံခါးပဲဆိုတာကို သံသယရှိစရာကို မလိုတော့ဘူး။
တံခါးကို ခပ်ဖွဖွ ခေါက်လိုက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် လည်ချောင်းရှင်းလိုက်မိတယ်။ ခြေတစ်လှမ်းနောက်ဆုတ်ပြီး စောင့်နေလိုက်တယ်။ ဆယ့်ငါးစက္ကန့်လောက် ကြာသွားတယ်။ ဘာမှမထူးခြားဘူး။ ကျွန်တော် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ခေါက်လိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ နည်းနည်းပို ပြင်းသွားတယ်။ ပြီးတော့ နောက်ကိုဆုတ်ပြီး စောင့်လိုက်ပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါလည်း မထူးခြားဘူး။
ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ လေထုက တဖြည်းဖြည်းအေးခဲလာသလိုပဲ။
မသိုးမသန့်ဖြစ်လာတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း တတိယအကြိမ် တံခါးခေါက်ဖို့ ရှေ့တိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ တံခါးက အသံလုံးဝမထွက်ဘဲ သူ့အတိုင်း ပွင့်သွားတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် လေညင်းက သာသာဝင်တိုးလို့ တံခါးက မျောက်လက်တွေ လည်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စမှာက သဘာဝတရားနဲ့တော့ မဆိုင်လှပါဘူး။ ချက်ခနဲအသံတစ်ခု မြည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ လူတစ်ယောက်ပေါ်လာတာ မြင်လိုက်ရတယ်။
သူက အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်ပဲ၊ ကျွန်တော့်ထက် နှစ်လက်မလောက် အရပ်နိမ့်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ လျှော်ထားတဲ့ သူ့ဆံပင်တွေဆီက ရေတွေ တစ်စက်စက်ကျနေတယ်။ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ အ၀တ်အစားဆိုလို့ ကြက်သွေးရောင်ရင့်ရင့် ရေချိုးသပတ်ကြီးတစ်ခုပဲပါတယ်။ သူ့ခြေထောက်တွေက ထူးထူးခြားခြား ဖြူစွတ်နေပြီး ခြေဖ၀ါးကျတော့ ကလေးတစ်ယောက်လို သေးသေးလေး။ သူ့ကြည့်ရတာ လေးကြောင်းမျဉ်းစာအုပ်တစ်အုပ်လိုပဲ၊ ထူးခြားတဲ့စရိုက်လက္ခဏာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံမှာတော့ တောင်းပန်တဲ့အပြုံးလေးသဲ့သဲ့ တွဲလဲခိုနေတယ်။ ဒီတော့ လူဆိုးတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်လောက်ဘူးပေါ့။
`ဆောရီးဗျာ၊ ကျွန်တော်ရေချိုးနေလို့´ လို့ သပတ်နဲ့ သူ့ဆံပင်တွေကို သုတ်ရင်း သူက ပြောတယ်။
`ရေချိုးနေတာလား´ လို့ ကျွန်တော်က ပြောရင်း လက်ပတ်နာရီကို အလိုလိုကြည့်လိုက်မိတယ်။
`အဲဒါ စည်းကမ်းပဲလေ။ နေ့လယ်စာစားပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ ရေချိုးရတာပဲ´
ဂျာကင်အိတ်ကပ်ထဲက ပို့စကတ်ကို ကျွန်တော်က ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး အဲဒီလူဆီ ထိုးပေးလိုက်တယ်။ သူက ရေစိုသွားမှာစိုးရိမ်သလိုနဲ့ လက်ဖျားကလေးတွေနဲ့ ကိုင်ပြီး အခေါက်ခေါက်အခါခါ ဖတ်နေတယ်။
`ကျွန်တော် ငါးမိနစ်လောက်နောက်ကျသွားတယ် ထင်တယ်၊ ဆောရီးပါဗျာ´ လို့ ကျွန်တော်က ပြောလိုက်တယ်။
သူက ခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီး ကတ်ကို ကျွန်တော့်ဆီ ပြန်ပေးတယ်။ `အင်း… ဒီတော့ ခင်ဗျားဒီမှာ အလုပ်စလုပ်တော့မယ်ပေါ့´
`ရယ်စရာတော့ကောင်းသား။ ၀န်ထမ်းသစ်ခေါ်မယ်လို့ ကျွန်တော် မကြားမိလိုက်ပါလား။ ကျွန်တော့်အထက်လူကြီးဆီ ခင်ဗျားအကြောင်း ကျွန်တော် သတင်းပို့ပေးရမှာ။ ဒါ ကျွန်တော့် အလုပ်ပဲလေ။ တံခါးဖွင့်ပေးပြီး အထက်လူကြီးဆီသတင်းပို့တဲ့အလုပ်ပဲ ကျွန်တော်က လုပ်ရတာ။’
တကယ်တော့ ကျွန်တော်လည်း ရေဘဲကို မမြင်ဖူးပါဘူး။ အဲဒီစကားလုံး ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ ရှိနေတယ်ဆိုတာတောင် ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ပြောလိုက်တာ မကြားရသေးခင်အထိ ကျွန်တော်သိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ `ရေဘဲ´ ဆိုတာက ကျွန်တော်သိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အက္ခရာရှစ်လုံးပါ စကားလုံးပဲလေ။ သဲလွန်စနဲ့ ကိုက်ညီတာဆိုလို့ အဲဒါတစ်ခုပဲ ကျွန်တော်တွေးကြည့်လို့ရတယ်။
`သြော်ဟုတ်လား။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါဆို ခင်ဗျား ကျွန်တော့်အကြောင်း သတင်းပို့ပေးမှာပေါ့´
`ဒါပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ကို စကားဝှက်ပြောရင်ပေါ့´
ကျွန်တော်က ခေါင်းခါလိုက်ပြီး `စကားဝှက်အကြောင်း ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူမှ မပြောပါဘူး´
`ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်အထက်လူကြီးက အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ သိပ်တင်းကြပ်တဲ့လူ။ စကားဝှက်မသိရင်တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကျွန်တော် ၀င်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး´
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အဆန်းကြီးလို့ပဲ ဆိုရမှာ။ အိတ်ကပ်ထဲက ပို့စကတ်ကို ကျွန်တော်ထပ်ထုတ်လိုက်ပြီး တောင်တောင်အီအီ လျှောက်ဖတ်နေမိတယ်။ စကားဝှက်အကြောင်း မပါပါဘူး။
`စကားဝှက်အကြောင်း ရေးဖို့မေ့သွားတာလားဗျာ။ ဒီကို ဘယ်လိုလာရမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်ကလည်း နည်းနည်းရှုပ်နေသလားပဲ။ ခင်ဗျားအထက်လူကြီးဆီ သတင်းသွားပေးမယ်ဆိုရင်လည်း အားလုံးအဆင်ပြေမှာပါ။ ကျွန်တော့်ကို ဒီနေ့အလုပ်စဆင်းဖို့ ခေါ်ထားတာ။ ဒါကို ခင်ဗျားအထက်လူကြီး အားလုံးသိမှာပါ။ ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်လို့ ခင်ဗျားသွားပြောပေးတယ်ဆိုရင်ပဲ….´
`အဲဒီအတွက်ပဲ ကျွန်တော်က စကားဝှက်လိုနေတာလေ´ သူက ပြောရင်းဆိုရင်း စီးကရက်နှိုက်ဖို့ အိတ်ကပ်ကို စမ်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ ရေချိုးသပတ်ကြီးကိုပဲ စမ်းမိတယ်။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်စီးကရက်တစ်လိပ် သူ့ကို ထုတ်ပေးလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်မီးခြစ်နဲ့ပဲ မီးညှိပေးလိုက်တယ်။
`ကျေးဇူးဗျာ။ စကားဝှက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုခု အခု ခင်ဗျားစဉ်းစားမရဘူးဆိုတာ သေချာလား´
ကျွန်တော်ကတော့ ခေါင်းပဲ ယမ်းပြနိုင်တော့တယ်။
`ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုလက်ပေါက်ကပ်တဲ့အလုပ်ကို ခင်ဗျားလိုပဲ မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် အထက်လူကြီးမှာလည်း သူ့အကြောင်းနဲ့သူ ရှိမှာလေ။ ကျွန်တော်ပြောတာ သဘောပေါက်လား။ သူဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာ ကျွန်တော်မသိဘူး။ သူနဲ့ ကျွန်တော် တစ်ခါမှ လူချင်းတွေ့ဖူးတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲလိုလူမျိုးတွေအကြောင်း ခင်ဗျားသိတယ်မဟုတ်လား။ သူတို့က ဦးနှောက်မုန်တိုင်းဆင်နေတဲ့ လူတွေလေ။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာ´
`ကျွန်တော့်အရှေ့က လုပ်သွားတဲ့တစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ စကားဝှက်ကို `မေ့သွားရုံလေးပါ´ လို့ ပြောတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ချက်ချင်းပဲ အလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်တဲ့။ သူလည်း အဲဒီလူအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်တဲ့။ အခုခေတ်မှာက အလုပ်ရှာရဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့အားလုံး အသိပဲမဟုတ်လား´
`ဒါဆို အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ကို သဲလွန်စပေးနိုင်လား။ နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ဗျာ´
တံခါးပေါ်မှီရင်း အဲဒီလူက မီးခိုးငွေ့တွေ မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။
`ဆောရီးဗျာ။ အဲဒါ စည်းကမ်းနဲ့မညီဘူး´
`အာ.. လုပ်ပါဗျာ။ သဲလွန်စလေးနည်းနည်းပေးတာနဲ့တော့ ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး´
`ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြင်ကိုပေါက်သွားရင်တော့ ကျွန်တော်ချောက်ကျပြီဗျ´
`ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဘူး။ ခင်ဗျားလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဘူး။ ကဲ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး တစ်ယောက်ယောက်သိနိုင်မလဲ´
ကျွန်တော့်အတွက် သေရေးရှင်ရေး အရေးကြီးနေတာပဲ။ ဒီတော့လည်း လက်လျှော့လိုက်လို့ မဖြစ်ဘူး။
ချည်တုံချတုံ ခဏဖြစ်နေပြီးတော့ အဲဒီလူက ကျွန်တော့်နားနားကပ်ပြီး တီးတိုးပြောလိုက်တယ်။
`သေချာနားထောင်နော်။ စကားလုံးက ရိုးရိုးလေးဗျာ၊ ရေနဲ့ပတ်သတ်တယ်။ ခင်ဗျားလက်တစ်ဆုတ်စာပဲ ရှိမယ်၊ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျား အဲဒါကို စားလို့မရဘူး´
ဒီတစ်ခါတော့ စဉ်းစားခန်းဝင်ရတဲ့လူက ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်။
`ဒီ (D) ´ လို့ သူကပြောလိုက်တယ်။
`ရေမျောသစ်တုံး (Driftwood)´ လို့ ကျွန်တော်က ပြောကြည့်လိုက်တယ်။
`မှားတယ်။ နှစ်ခါကျန်သေးတယ်´ လို့ သူကပြောတယ်။
`နောက်နှစ်ခါ ဖြေလို့ရသေးတယ်။ အဲဒီနှစ်ခါမှာ လွဲရင်တော့ ပြီးသွားပြီ။ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။ ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းဖောက်ပြီး ကျွန်တော်လည်း အတော်လေးစွန့်စားပြောနေရတာ။ ခင်ဗျား ဒီလို အထပ်ထပ်မှန်းပြောနေတာမျိုး ကျွန်တော်ခွင့်ပြုလို့ မဖြစ်ဘူးလေ´
`ဒီလိုဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးပေးတာကို ခင်ဗျားကို တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ်သဲလွန်စ နည်းနည်းလောက် ထပ်ပေးပါလား။ အဲဒီစကားလုံးမှာ အက္ခရာဘယ်နှစ်လုံးပါလဲ ဆိုတာမျိုးပေါ့´
`နောက်တစ်ခါဆိုရင် စကားဝှက်ကဘာလဲလို့ ခင်ဗျားကျွန်တော့်ကို မေးဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်´
`မမေးပါဘူး။ ကျွန်တော် လုံးဝ မမေးဘူးဗျာ။ အက္ခရာဘယ်နှစ်လုံးပါလဲဆိုတာလေးပဲ ကျွန်တော့်ကို ပြောပြပေး´
`အိုကေ။ ရှစ်လုံး။ ကျွန်တော့်အဖေက ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းပြောတာ။ လူတစ်ယောက်ကို လက်ပေးကိုင်လိုက်တာနဲ့ လက်မောင်းရင်းထိရောက်လာရော ဆိုတာ´ သူက သက်ပြင်းချပြီး ပြောလိုက်တယ်။
`ကဲပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ အဲဒါက အက္ခရာရှစ်လုံးဗျာ´
`ရေနဲ့ပတ်သက်တယ်။ လက်နဲ့ကိုင်ဖို့ ဆံ့တယ်။ ပြီးတော့ စားလို့မရဘူး´
`ပြီးတော့ ဒီ (D) နဲ့ စတယ်´
ပဟေဠိကို ကျွန်တော် နက်နက်နဲနဲ စဉ်းစားနေမိတယ်။ နောက်ဆုံးမှ `ရေဘဲ (Dabchick)´ လို့ ကျွန်တော် အော်ပြောလိုက်မိတယ်။
`မဟုတ်ဘူး။ ရေဘဲကို စားလို့ရတာပေါ့´
`ဟုတ်တယ်လေ။ အရသာတော့ ကောင်းချင်မှကောင်းမှာပေါ့´ သူက ရာနှုန်းပြည့်သေချာတဲ့လေသံ လျော့သွားပြီး ထပ်ဖြည့်ပြောတယ်။
`ပြီးတော့ ခင်ဗျားလက်နဲ့လည်း မဆံ့ဘူးလေ´
`ဟေ့လူ ခင်ဗျား ရေဘဲကိုရော မြင်ဖူးရဲ့လား´
`ဟင့်အင်း။ ငှက်တွေအကြောင်း ကျွန်တော် ဘာမှမသိဘူး။ ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ငှက်ဆို ပိုဆိုး။ ကျွန်တော် မြို့လယ်ခေါင်မှာ ကြီးခဲ့တာဗျာ။ ကားမှတ်တိုင်တွေ အစဉ်လိုက် ရွတ်ပြလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေဘဲတော့ မမြင်ဖူးဘူးလေ´
`ဟောဒီမှာ လက်ဖ၀ါးအရွယ်ရေဘဲ ခေါင်းချခဲ့ပါတယ်´ ဆိုတာ အုတ်ဂူပေါ်ထွင်းထားတဲ့ စာသားတွေပေါ့။
`စကားဝှက်ဟာ ရေဘဲပဲဖြစ်ရမယ်ဗျာ´ ကျွန်တော်က အကြောက်အကန် ငြင်းလိုက်တယ်။ `အသေးကောင်လေးတွေ။ လက်ဖ၀ါးအရွယ် ရေဘဲတွေ အရသာက ဆိုးမှဆိုး။ ရေဘဲကို စားမယ့်ခွေးတစ်ကောင်တောင် ခင်ဗျားရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး´
`ဟေ့လူ နေဦးဗျာ။ ခင်ဗျား ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာက အရေးမကြီးဘူး။ `ရေဘဲ´ ဟာ စကားဝှက်မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားကြိုက်သလို ငြင်းနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားစကားဝှက်ကို မှားပြောနေပြီ´
`ဒါပေမဲ့ အဲဒါက သဲလွန်စတွေအားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီတယ်မဟုတ်လား။ ရေနဲ့ ဆက်စပ်တယ်၊ ခင်ဗျားလက်ထဲမှာ ဆံ့တယ်၊ စားလို့မရဘူး။ အက္ခရာ ရှစ်လုံး။ ကွက်တိပဲလေ´
`ကဲ ဒါဆို စကားဝှက်အမှန်က ဘာတုံး´
`ရှိမှမရှိတာ ဘယ်ပြောလို့ရမလဲ´ ကျွန်တော်က လေသံကို အတတ်နိုင်ဆုံး အေးစက်စက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီး မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ ပြောလိုက်တယ်။
`ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၊ လက်နဲ့ကိုင်လို့ဆံ့တဲ့၊ စားလို့မရတဲ့ အက္ခရာရှစ်လုံးပါ တခြားစကားလုံးမှ မရှိတော့တာ´
`ရှိတယ်လေဗျာ´ လို့ သူက တောင်းပန်တိုးလျှိုးနေတယ်။ မျက်ရည်တောင် ၀ဲနေပြီ။
`ခင်ဗျား သက်သေမပြနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ ရေဘဲက သတ်မှတ်စံအားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီတယ်´
`ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဗျာ လက်ဖ၀ါးအရွယ် ရေဘဲကလေးကို စားချင်တဲ့ ခွေးတစ်ကောင် တစ်နေရာရာမှာ ရှိချင်ရှိနေမှာမဟုတ်လား´
`ကောင်းပြီ။ ခင်ဗျားဒီလောက်ဉာဏ်ပြေးနေရင် အဲဒီလိုခွေး ဘယ်မှာရှာရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော့်ကိုပြောပြ။ ဘယ်လိုခွေးမျိုးလဲ။ သက်သေခိုင်ခိုင်လုံလုံ ပြ´
သူက ညည်းညူလိုက်ပြီး မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ် လုပ်နေတယ်။
`ခွေးအကြောင်း သိကောင်းစရာအားလုံး ကျွန်တော်သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်လိုလူတောင် လက်ဖ၀ါးအရွယ် ရေဘဲကို စားချင်တဲ့ ခွေးမျိုး လုံးဝ၊ ဘယ်တော့မှ မသိဘူး´
`သူတို့က အရသာ အဲလောက်ဆိုးလား´ လို့ သူက စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ ညည်းညူနေတယ်။
`ဆိုးတယ်၊ သိပ်ဆိုးတယ်။ ဝေါ့..´
`မစားဖူးဘူး။ ဒီလို အော်ဂလီဆန်တာကြီးကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ထည့်မယ်လို့ ခင်ဗျားထင်လို့လား´
`ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျား အထက်လူကြီးကို ကျွန်တော်ရောက်လာကြောင်း သွားအကြောင်းကြားလိုက်ပါ´ ကျွန်တော်က ခပ်မာမာတောင်းဆိုလိုက်တယ်။
`ကျွန်တော် အရှုံးပေးပါပြီဗျာ´ လို့ သပတ်နဲ့ သူ့ဆံပင်တွေကို ထပ်သုတ်ရင်း သူကပြောလိုက်တယ်။ `ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်အလားအလာမကောင်းဘူးလို့တော့ ကျွန်တော် တော်တော်လေးသေချာတာပါပဲ´
`ကျေးဇူးပဲ။ ခင်ဗျားအပေါ်မှာ ကျေးဇူးတစ်ခု တင်သွားပြီ´ လို့ ကျွန်တော်က ပြောလိုက်တယ်။
`ဒါပေမဲ့ ပြောပါဦးဗျာ။ လက်ဖ၀ါးအရွယ်ရေဘဲလေးတွေ တကယ်ရှိတာပဲလား´
`ရှိပါ့။ သိပ်သေချာတာပေါ့။ တစ်နေရာရာမှာတော့ ရှိတယ်´ လို့ ကျွန်တော်က ဇွတ်ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒီစကားလုံး ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ ဘယ်လိုပေါ်လာသလဲတော့ ကျွန်တော့်ဘာသာလည်း မသိဘူး။
`လက်ဖ၀ါးအရွယ်ရေဘဲ´ က သူ့မျက်မှန်ကို ကတ္တီပါစကလေးနဲ့ သုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နောက်ထပ်တစ်ခါ သက်ပြင်းထပ်ချတယ်။ သူ့ရဲ့ ညာဘက်အောက် အံသွားက တစစ်စစ်ကိုက်နေတယ်။ သွားဆရာဝန်ဆီ ထပ်ပြေးရဦးမှာလား၊ သူစဉ်းစားကြည့်တယ်။ နောက်တစ်ခါတော့ ထပ်မသွားနိုင်တော့ဘူး။ ကမ္ဘာကြီးဟာ သောက်တလွဲပဲ၊ ဘာလဲ.. သွားဆရာဝန်တွေ၊ အခွန်တွေ၊ ကားအတွက်သွင်းရတဲ့ ငွေတွေ၊ အဲကွန်းအပျက်တွေနဲ့..။ သူက ခေါင်းကို သားရေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ လက်တင်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ မှီဖျော့ထားလိုက်တယ်။ မျက်လုံးတွေကို မှိတ်လိုက်ပြီး သေခြင်းတရားအကြောင်း အတွေးဆန့်နေမိတယ်။ သေခြင်းတရားဆိုတာကတော့ သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်လိုပဲ ငြိမ်သက်လှပါတယ်။ မေလရဲ့နှင်းဆီတစ်ပွင့်လိုလည်း ချိုမွှေးတယ်။ ဒီနေ့တွေမှာ ရေဘဲကတော့ သေခြင်းတရားအကြောင်း အတော်လေး တွေးနေမိခဲ့တာပဲ။ သူ့စိတ်ထဲမှာ သူ့ရဲ့ ထာဝရမှေးစက်ရာကို ပျော်မွေ့နေတယ်လို့ ထင်နေရတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ သူ့ရဲ့ စကားပြောစက်က တဂျစ်ဂျစ်ထမြည်လာတယ်။
သူက စက်ကိုချိန်ပြီး ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ အော်လိုက်တယ်။
`ဆရာကို တွေ့ဖို့ လူတစ်ယောက်ရောက်နေပါတယ်´ တံခါးစောင့်ရဲ့အသံထွက်လာတယ်။ `သူ့ကို ဒီနေ့မှာ အလုပ်စဆင်းခိုင်းတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ သူက စကားဝှက်ကိုလည်း သိတယ်´
လက်ဖ၀ါးအရွယ်ရေဘဲက ဗြစ်တောက်ဗြစ်တောက်ပြောရင်း သူ့လက်ပတ်နာရီကို ကြည့်လိုက်တယ်။
(Dabchick by Haruki Murakami. English translation by Jay Rubin. Image sources: hyraxia.com / flickr.com)
Source: လရောင်လမ်း ဘာသာပြန် – တေဇာ။
Categories: Prose, Short Stories | Tags: ဘာသာပြန်, ဟာရူကီ မူရာကာမီ, တေဇာ, ၀တ္ထုတို, Haruki Murakami, lanolay, Short Stories, Tazar Moonlitpath | Permalink.